Nhau uye Updates Transfer Service Basel - Zurich
Guta rekufamba uye kuona mahofisi neTransfer Service Basel
06 Kubvumbi 0
Airport shuttle, muBasel, nhandare yendege Shuttle, Limousine basa, guta hwatsvuka
Kwete chete bhizinesi revatengesi - asiwo mhuri nemapoka kusvika kuvanhu vane 7 - tinopa mukana wekufamba rwendo rwunofadza mune imwe yeklasi yedu yakaisvonaka limousines. Kunyanya mumwedzi yemazhizha, Basel inokwezva vazhinji vezvivakisi vanoda kutsvaga maguta akapoteredza kuSwitzerland, France neGermany. Nokuda kwenzvimbo yedu yakanakisisa tinogona kuita kuti guta rako rive rakanaka sezvinobvira. Vazhinji vevatengesi vebhizimisi vedu vanowana mukana wekubatanidza bhizinesi nevanenge vari voga uye kutungamirirwa nevatadzi vedu vane ruzivo kubva kune bhizinesi kudzvinyirira uye kushamwaridzana kwevanhu
BASA RINO 2018 - Kufamba uchitenderera neTransfer Service Basel
16 Kurume 0
Airport shuttle, muBasel, Baselworld, Transfer service
Gore roga roga muchitsime, Basel imusha kwevhiki kune mamwe makambani anonzi 1,800 anopa maziso avo uye zvishongo zveBazelword. Vakarongeka vekukosha kwekutengeserana uku kwakakosha vasina kunyunyuta pamusoro pekukosha kwevashanyi. Kuwanda kwevashambadziri ve100,000 nevamiriri veavo vese vanotengeserana kuti vauye kuWorld Fair ye Watches uye Jewelery. Musi waChishanu 22, 2018 masuo ezvakanaka achazarurirwa vashanyi. Newe mutyairi wako pachako ku BASELWORD - Transfer Service Basel Yedu EuroAirport Basel inongova maminetsi mashomanana kubva pamusangano. Asi zvechokwadi - semamwe akawanda
muBasel, nhandare yendege Shuttle, Limousine basa
BASA RINO 2018 - Yakanaka kufamba neTransfer Service Basel
Airport shuttle, Baselworld, Kushandiswa kwechikepe, Trade fair transfer, Transfer service
Zvose zvinyorwa zveBasel zvinopindira kune dzimwe makambani anonzi 1800 anounza varindi vavo uye zvishongo zvezvishongo paBaselword. Hapana chikonzero chekunyunyutira pamusoro pehuwandu hwevashanyi kune izvi zvakakosha mune zvekutengeserana, nokuti segore negore, 2017 inotarisirwa kumira nevanotengesa 100.000 uye vamiriri vehupfumi paWorld Watch uye Jewellery Show. Panguva yeC22 March 2018 masuo ewakanaka achazarurirwa kubuda kwevashanyi. Shanya zvakanaka pamusoro peBASELWORD - Transfer Service Basel Yedu EuroAirport Basel inongova maminetsi mashomanana nemotokari kubva panzvimbo yekuratidzira. Asi iwe zvechokwadi unoda-kufanana nevamwe vakawanda vanofamba nebhizimisi-muwonesi wekugadzira
360 ° Kutumira basa kune hoteli vaenzi muBasel
09 Kurume 0
Tinokupai basa rinokosha sehotera muenzi wedu muguta rakanaka reBasel. Nebasa rose rebasa panguva yekugara muBasel tinovimbisa kuti iwe unogona kutarisa pane zvinokosha-kana kuona nzvimbo muBael's old town, kushanyira Kunstmuseum kana kusarudzwa kwebhizimisi. Dhipatimendi rekutsinhanisa zvakananga kubva paIndaneti Guta kana Hotel Tichakutarisira iwe paunosvika kuBasel kudivioti kana kuti gare gare. Tinokumirirai paunosvika kuguma uye tinokubvisai parwendo rwenyu nekukubatsira nemutoro wenyu kuenda kumakumbo edu. Kubva ipapo tinoperekedza
Airport Shuttle yeZurich neBasel
23 Ndira 0
muBasel, nhandare yendege Shuttle, Limousine basa, Zuerich
Kusvika zvakachengeteka uye nenguva - ne Premium Transfer Service yako Unofunga kuenda mune bhizimisi kana kufara iwe pachako uye unoda kuisa pachena kutenderera nemhepo yakatendeseka yekuvhara ndege usati waenda? Mutyairi wedu achakutorera nemumwe wemhando dzedu dzakakwirira, dzakachengetedzwa zveGermany kubva kumusha, kubva kuhofisi kana pasuo rekunze. Zvechokwadi tichakubatsira nemutoro. Zvechokwadi, iyo ndege yako inofanira kusvika nguva pfupi, hatingakuregi iwe pasi asi tarisira kuti iwe uuye. Vanosvika vakasununguka uye vakasununguka kune imwe nzvimbo Vakawanda vevatakadzi vedu vanoshandisa ndege yekuendesa ndege pakati peZurich Airport neEuro